Waxaan rabaa inaan ku daro amarrada Twitch ➡️ ➡️ Followers ▷ ➡️
Waxaan rabaa inaan ku daro amarrada Twitch
Waxaa laga yaabaa 5, 2021 0 comments 336
Waxaan rabaa inaan ku daro amarrada Twitch.
Marar badan qaar baan galnaa Kanaalka Twitch iyo waxaan ku aragnaa astaamo iyo ereyo aad u tiro badan shaashadaha wadiiqooyinka gudbinta ee aan ku qornay, inta badan ereyada iyo astaamahan wax macno ah nagama sameynayaan waana wax ay dhexdhexaadiyeyaashu iyo wariyeyaashu ku sameyn karaan kanaalkooda.
Kuwani waa amarro, Iyaga ayaa mas'uul ka ah bixinta tilmaamaha nidaamka si ay u fuliyaan ficillo gaar ah inta lagu jiro baahinta. Amarradan waxaa loo qaabeeyey sidii aan horey kuugu sheegnay, kuwa wax ka beddelaya ama kuwa wax hagaajiya, si ay u awoodaan inay xakameeyaan waxyaabaha qaarkood ee gudbinta.
Maxay u yihiin:
Tan waxaad ku sameyn kartaa maareeyaan shaqooyinka kanaalkaaga iyo isdhexgalka aad la leedahay kuwa raacsan inta lagu gudajiro tabinta tooska ah.
Awood u yeelan doono si ay ula falgalaan oo leh wadiiqooyin kale iyo ciyaartoy.
Waxay yihiin a kheyraad aad u qiimo badan dhexdhexaadiyeyaasha markay fulinayaan tabinta iyo in wax walba ay ku socdaan habka ugu wanaagsan ee wadahadalka iyo kuwa raacsan.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa abuuro amarro gaar ah in lagu dhawaaqo dhacdooyin gaar ah.
Waxaa jira dhowr nooc oo amarro ah oo horey loogu sii caddeeyay barxadda oo si gaar ah loogu adeegsado xaaladaha gaarka ah, xagga hoose, waxaan ku soo qori doonnaa waxay yihiin iyo cidda qaban karta. Maskaxda ku hay in amarradan midkood loo muujin doono sida soo socota: / amarka magaca, waana sidan sida loo qaabeeyey.
Amarada aasaasiga ah ee dhammaan adeegsadayaasha: kuwan waxaa loo heli karaa dhammaan isticmaalayaasha barxadda:
Amarada aasaasiga ah ee loo yaqaan 'streamers and moderators':
Xog gaar ah.
Amarada ku saabsan isticmaalka gaarka ah ee qulqulka kanaalka baahinta / tifaftireyaasha:
Amarada isticmaalka gaarka ah ee qulquliyeyaasha:
Marka laga reebo awaamiirtii hore loo tilmaamay oo laga helo a ugu talagal bogga 'Twitch platform', waxaa jira amarro taxane ah oo aad ugu dhaqaajin kartid qaab shaqsiyeed.
Sida loo sameeyo waa sida soo socota:
Waa inaad gashaa qaybta loo aqoonsaday inay tahay "Amarada", goor dambe waa inaad doorataa ikhtiyaarka "Liiska Amarka".
Daaqad cusub ayaa furi doonta meesha aad ka gali karto amarka aad doorbideyso, tilmaamahan waxaa lagu qori doonaa qayb nidaamka uu ku siin doono, ficilkan. Kadib riix xulashada "Abuur".
Tani waxay fureysaa daaqad cusub oo pop-up ah oo aad ku qori laheyd dib-u-eegis kooban oo sharraxaysa shaqada amarka aad adigu abuurtay, qoraalkaan waxaa lagugula talinayaa inaad amarka magac u bixiso. Taabo "Badbaadi".
Haddii aad rabto inaad abuurto amarro cusub, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa aaladaha saddexaad, kuwaas oo aan kugula talin karno inaad tahay:
Dabaqadaha: Tan waxaad awoodi doontaa inaad maareyso gabi ahaanba wax kasta oo ku dhaca gudbinta, adoo abuuraya amarradaada si aad si hufan u xakameyso wadahadalka iyo dhammaan walxaha ku xiran gudbinta iyo kanaalkaaga.
Nightbot: Waxaa loogu talagalay dhexdhexaadiyeyaasha isla markaana sameeya wax ka badan ama ka yar sidii kii hore.
Mootbot: loogu talagalay abuurista amarrada aad awoodi doonto inaad si toos ah u adeegsato.
1 Waxaan rabaa inaan ku daro amarrada Twitch.
1.1 Maxay u yihiin:
1.2 Noocyada taliska:
1.3 Amarada aasaasiga ah ee loo yaqaan 'streamers and moderators':
1.4 Amarada ku saabsan isticmaalka gaarka ah ee qulqulka kanaalka baahinta / tifaftireyaasha:
1.5 Amarada isticmaalka gaarka ah ee qulquliyeyaasha:
1.6 Sida loo sameeyo waa sida soo socota:
1.7 Meelaha taageerada:
Waxaa laga yaabaa 5, 2021
Sidee looga soo degsadaa fiidiyowyada Youtube SS?
Sidee loo arkaa tirakoobka barta Instagram?